Xukumadda oo wax ka beddelaysa maamulka KI - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
sawir: Foto: TT
Xukumadda oo wax ka beddelaysa maamulka KI
La daabacay torsdag 3 mars 2016 kl 16.03
Dowladda ayaa maanta go’aamisay in la beddelo qaar ka mid ah maamulka jamacadda Karolinska institutet.
Go’aankan waxuu debbo socdaa fadeexadii Paolo Macchiarini oo la xiriirtay qaliin luqunta ah oo uu ku sameeyey bukaan isagoo u geliyey hunguri caag ka sameysan. Macchiarini ayaa lagu eedeeyey daraasadiiisa in ay aheyd mid qiyaano ah. Inta badan buukaankii uu qaliinka ku sameeyey oo hunguriga ka beddelay waa geeriyoodeen. Ninkan dhaqtar ah ayaa dhawaan laga cayriyey shaqadii cilmibaarista uu ka waday jaaamacadda KI, waxaana socda baaritaan lagu hayo daraasadiisa.
Fadeexadda Paolo Macchiarini ayaa hadda saameyn ku yeelatay maamulka jaamacadda KI. Maamulka jaamacadda waxuu u baahanyahay ”dib u cusbooneysiin”. Sidaas maanta waxaa ku dhawaaqay dowladda oo go’amisey in isbeddel lagu sameeyo qayb ka mid maamulka jaamacadda .
”Waxa ka dhacay KI waa arrintan qatarteeda leh. Si hadabo loo hubiyo oo dib loogu abuuro kalsooni sare oo lagu qabo howl-sha jaamacadda waa lagamo maarmaan dib u cusbooneynta maamuulka jaamacadda, sidaas waxaa tiri wasiirka cilmibaarista iyo tacliinta sare Hellmark Knutsson (S) oo la hadlaysay TT.
Tirada maamulka ka tirsan ee labadalayo weli macadda. Hogaanka Maamulka jamacadda hadda waxaa haya Lars Liejonborg, maamulka ayaa horey loogu dhaleeceeyey sida ay u maareeyeen eedeymaha loo jeedinayey Paolo Macchiarini iyo cilmibaaristiisa la xiriirta hunguriga caaga ka sameysan.
Paolo Macchiarini oo machadka Karolinsku shaqada ka cayrinayo